Cush Jumbo na BLG Mind na-ekwu banyere ịbụ nne na nna na ahụike uche - Bromley, Lewisham & Greenwich Mind
Cush Jumbo na-eji BLG Mind na-ekwu maka ịbụ nne na nna na ahụike uche
Ihe na November 10, 2021 site BLG Uche Udi: General
Onye na-eme ihe nkiri Cush Jumbo, n'ihu aka nri, ya na BLG Mind Chief Executive Ben Taylor, n'ihu aka ekpe, na ndị ọrụ, ndị ọrụ afọ ofufo na ndị sonyere na Mindful Mums na ịbụ nna.
Onye omere ama ama Cush Jumbo gara leta BLG Mind na Nọvemba izute Chief Executive Ben Taylor na ndị ọrụ, ndị ọrụ afọ ofufo na ndị sonyere na Mindful Mums na ịbụ nna, ọrụ ọdịmma anyị maka ndị nne na nna dị ime na ndị mụrụ ọhụrụ.
Kush, onye na-eme egwuregwu ugbu a na Mmepụta Vic na-eto eto nke Hamlet, mụtara banyere ọrụ nke ọrụ ahụ ma kesaa ahụmahụ nke onwe ya nke ahụike uche na ịbụ nne.
Kush na ndị sonyere Mindful Mums na-ekerịta ọchị
N'oge ọ mụrụ nwa ya nwoke, onye na-eme ihe nkiri bi na New York ma na-eme ihe nkiri dị ka onye ọka iwu Lucca Quinn na Emmy award-emeri CBS drama 'The Good Fight', nke pụtara usoro ihe nkiri na-agwụ ike.
Cush kwuru na ọ ga-amasị ya ịga otu ahụike dị ka Mindful Mums na New York, na-agbakwunye: "Ọ gaara abụ isi ihe n'izu m, kwa izu."
Mindful Mums bụ mmemme nkwado ahụike uche nke BLG maka ụmụ nwanyị dị ime na ndị nne ọhụrụ. Ọ na-enye nkuzi ahụike ogologo izu ise yana ọrụ ime enyi, nke ndị ọrụ afọ ofufo nwere ahụmịhe nke onwe ha na-ejikwa ahụike uche n'oge ndụ a. A na-ewu otu a n'eziokwu na mmekọrịta bara uru ebe ụmụ nwanyị nwere ike ịkparịta ụka banyere ịdị elu na ọnụ ala nke ịbụ nne n'atụghị egwu na a ga-ekpe ha ikpe.
Mindful Mums and Being Papa Onye nhazi oru ngo Karen Taylor kọwara ka mmemme a na-agba ụmụ nwanyị ume ikwupụta mmetụta ha n'efu maka ịghọ nne.
Karen Taylor nke Mindful Mums na ịbụ Nna Nev Walters.
O kwuru, sị: “Ndị nne na-eche echiche abụghị maka ịbụ abụ ụlọ akwụkwọ ma ọ bụ ịzụ nwa na-asọmpi. Ọ bụ maka ụmụ nwanyị na-akwado ibe ha, na-ekerịta ihe dị elu na ihe dị ala nke ịghọ nne ma ghara ime ka ihe niile dị mma.
"Ahụ ahụ iru ala nke ụmụ nwanyị na-enwe mgbe ha sonyere n'ìgwè ahụ na-apụta ìhè."
Ịbụ nna nna nna Nev Walters kwuru banyere ọrụ dị mkpa ọrụ ahụ na-arụ n'ịgba ụmụ nwoke ume ikwu okwu.
Ọ sịrị: “Ọ bụ echiche na-akụda mmụọ na ị ga-abụ onye nwere atụmatụ mara ihe na-emenụ.
Cush Jumbo na ogige BLG Mind na Beckenham
"Ndị otu ịbụ nna na-agbanwe nke a nke nta nke nta. Ihe kacha mma bụ na ọ bụrụ na mmadụ na-ala azụ na mbụ, ozugbo ọ banyere n’ìgwè ahụ ma chọpụta na a gaghị ekpe ya ikpe, ha agaghị akwụsị ikwu okwu.”
Onye isi oche Ben Taylor gbakwụnyere: “Ndị mmadụ nwere ike ịbịakwute nne nne ma ọ bụ ịbụ nna ma ọ bụrụ na ha na ahụike uche ha na-alụ, mana ọ bụrụkwa na ha anaghị agba mgba. Ha na-emeghe ndị nne na nna ọhụrụ, n'ihi na anyị niile nwere ike ime n'ilekọta ọdịmma anyị n'oge mgbanwe ahụ. "
Ndị ọzọ sonyere na mmemme ahụ kwuru echiche ha gbasara ihe otu ahụ pụtara nye ha.
Leeanne, onye nọworo na-arụ ọrụ afọ ofufo maka Mindful Mums afọ abụọ ka o sonyechara na mbụ dị ka onye so na ya, kwuru, sị: “Ịbanye bụ ihe kacha mma m metụrụla na nnukwu mgbanwe maka ahụike uche m. Mgbe m malitere ịbịa, achọpụtara m na ihe niile m na-eche bụ ihe dị mma. N'agbanyeghị na a na-akpọ ya Mindful Mums, ọ bụghị maka ịnọdụ ala na-atụgharị uche. Anyị na-ekwu maka ahụ anyị, ihe na-ewute anyị, iwe. Anyị na-enwekarị mmetụta.”
Onye ọzọ bụbu onye ọrụ afọ ofufo, Selina, kwuru, sị: “A gbara m ume ịbanye n’ìgwè ahụ ịkọ akụkọ m, ma enwetara m ọtụtụ ihe n’ịzaghachi, aghaghị m ịmalite ọrụ afọ ofufo.”
Jessica, bụ́ onye ọrụ afọ ofufo ọhụrụ, kwukwara, sị: “Achọrọ m nnọọ ịnọ n’ebe ndị mmadụ na-eme ihe n’eziokwu; ọtụtụ ndị otu egwuregwu ebipụghị m ya.”
Kush gwara ìgwè ahụ, sị: “Ọ dị ịtụnanya ihe unu na-eme. Ndị nne na-eche echiche dị ka nkume na mpịakọta NCT. Ị na-eme iwu nke onwe gị, nke dabara na ịbụ nne ma ọ bụ nna: ọ dịghị onye na-enweta akara ugo mmụta na mama ma ọ bụ papa; anyị niile na-eme ya mana a na-atụ anya ịmara ihe niile. ”
Otu onye na-eme ihe nkiri nwere mmasị na ọrụ ịbụ nna. O kwuru na ọ bụ ihe nna ya, onye bụ nna nọrọ n'ụlọ nye Kush na ụmụnne ya ise mgbe nne ya na-arụ ọrụ, ga-enwe ekele maka ya.
Cush kpughere na ọ na-achọsi ike iji ụzọ dị mma maka ahụike uche nke o mepụtara site na ahụmịhe nke ya. O kwuru, sị: “Ọ bụrụ na ọ dị otu ihe m ga-achọ inye ya, ọ bụ mmekọrịta dị mma na ahụike uche.
O nwere ike ọ gaghị adị ya mma mgbe niile, ma achọrọ m ka o kwuo banyere ya kama izochi ihe. Ọ bụ nka dị mkpa. Ọ bụrụ na ahụike uche gị siri ike, ị nwere ike ịlanarị ihe ọ bụla. "